မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 10/01/2008 - 11/01/2008
ယနေ့မှစ၍ ဂျပန်ပြည်သို့ စွန့်စားခန်းသွားမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့်..
ဤဘလော့လေးအား ၂ပတ်မျှ စွန့်ခွာသွားရပါမည်...
ထို ၂ပတ်အတွင်း မဗေဒါ၏ ဘလော့လေး ဆက်လက်ရှင်သန်နေရေးအတွက် ဘလော့ဂါ အပေါင်းအသင်း ရောင်းရင်းများကိုသာ အားကိုးတကြီး အပ်နှင်းအပ်ပါသည်..
မဗေဒါဘလော့လေးအား.. ဆီပုံးတွင်နှုတ်ဆက်ချင်းဖြင့် အစာကြွေးနိုင်သလို.. ပိုစ့်အဟောင်းလေးများအား ကွန်မန့်ပေးခြင်းဖြင့်လဲ အားဆေးတိုက်၍ စောင့်ရှောက်နိုင်ပါသည်..
မဗေဒါပြန်လာလျှင် ဘလော့လေးကို စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှု အားဆေးတိုက်ပေးထားသော ဘော်ဘော်များကို စာရင်းနှင့်တကွ ဂျပန်ပြန်လက်ဆောင်ပေးပါမည်..
မဗေဒါမရှိသော်ညား. လာလည်မြဲ... အားပေးမြဲ စာဖတ်သူများ.... အားလုံးကို အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်....
ခေတ္တဂျပန်... ငှဲ.. ငှဲ
Posted by mabaydar at 6:17 PM 10 comments :
Posted by mabaydar at 4:59 PM6comments :
Posted by mabaydar at 7:57 PM 12 comments :
မနေ့ညက အလုပ်ကအပြန် အိမ်ကမိသားစုနဲ့ Mamma Mia (The Movie) ဆိုတဲ့ကားလေးကို ၉နာရီ ၄၀မိနစ်ပွဲ သွားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်..
အဲဒိကားရုံတင်တာ ၁လလောက်တောင်ရှိနေပါပြီ.. မဗေဒါလဲ ခုတလောရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်ပင်မဲ့ ဘာကားမှလဲ မယ်မယ်ရရကောင်းတယ်လို့ မကြားတာကတစ်ကြောင်း.. အဖော်လိုက်ပေးမဲ့သူမရှိတာကတစ်ကြောင်းဆိုတော့ မကြည့်ဖြစ်ဘူးလေ.. ဒါပေမဲ့ ကြည့်ဖြစ်သွားပုံကတော့.. အလုပ်က လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အစ်မတစ်ယောက်က သူ့မိသားစုနဲ့ ဟိုတစ်လောကသွားကြည့်တာ အရမ်းကောင်းကြောင်း.. ကြည့်ပြီးရင်စိတ်ထဲမှာ ပျော်ပြီးကျန်ခဲ့ကြောင်း.. ကြည်နူးဖို့ကောင်းပြီး သီချင်းတွေကလဲ အရင်ခေတ်က နာမည်ကြီးဘန်း ABBA ရဲ့သီချင်းတွေဖြစ်ကြောင်း အရမ်းညွှန်းပါတယ်.. မိသားစုလိုက်သွားကြည့်ဖို့တောင် တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်..
ပြီးတော့ ကျမစိတ်မပါပါအောင် youtube ကနေ သီချင်းတွေဖွင့်ပြပါတယ်.. သူတင်မကဘူး နောက်အစ်မကြီးတစ်ယောက်ကလဲ ထောက်ခံတိုက်တွန်းပါတယ်.. Mamma Mia ပိုးကိုကျမထဲကိုသွင်းပေးလိုက်ကြပါတယ်...
သိတဲ့အတိုင်း မဗေဒါတို့ကလဲ ဒီလို ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ဆို ၂ခါမခေါ်ရဘူးလေ.. သီချင်းတွေကလဲ ကိုယ်ငယ်ငယ်တုန်းထဲက သိနေတဲ့ ခပ်မြူးမြူးသီချင်းလေးတွေဆိုတော့ ကြည့်မယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့.. ပြီးတော့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့လေး မိသားစု စုစုစည်းစည်းအပြင်ထွက်ဖို့ ဖုန်းဆက်ပြီးအားလုံးကိုမေးတော့.. (သိတဲ့အတိုင်း အိမ်မှာက သူ မအား ကိုယ် မအားနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မေးဖို့အချိန်မရဘူး..) အားလုံးက သဘောတူကြတယ်..
ဖေဖေကတော့ ကျမတို့ ငယ်ငယ်ထဲကရုံမှာ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရင် အရမ်းဆူတတ်တယ်.. အိမ်မှာလဲ တီဗွီရှိနေတာ ပိုက်ဆံအပိုကုန်ခံပြီး သွားကြည့်တယ်ဆိုပြီး သူကတော့ ဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူး.. ပိုဆိုးတာက အိမ်မှာ ဟိုတစ်လောက IT Show ကနေ Home Theater system ရော Plasma TV ရော ၀ယ်ထားမိတာရော.. SVC Cable TV ရှိတာရောဆိုတော့.. (ဟဲ..ဟဲ.. ကြုံတုန်းလေး.. ကြွားတာ..) ဖေဖေက ဘယ်လိုမှတိုက်တွန်းလို့မရတော့.. အိမ်မှာရှိတဲ့ မိန်းမသားတွေပဲ အလုပ်ဆင်းတော့ သွားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်..
ဒီကားလေးဟာ DVD ထွက်တဲ့အထိ ကျမစောင့်ဝယ်ဖြစ်မဲ့ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..
ဂရိကျွှန်းလေးတစ်ကျွန်းပေါ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဟော်တယ် အသေးစားလေးပိုင်တဲ့ Single Mother Donna (Meryl Streep) ဟာ သူမသမီးလေး Sophie (Amanda Seyfried)ကို လက်ထက်ပေးဖို့ အချိန်ရောက်လာပါပြီ.. အဲဒိမင်္ဂလာပွဲအတွက် သူ့ငယ်သူငယ်ချင်း (ငယ်ငယ်က ကဲဖော်ကဲဖက်တွေပေါ့နော်) Rosie (Julie Walters) Tanya (Christine Baranski) တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ သူ့သမီး Shopie ကတော့ သူ့အမေ မသိအောင် အထူးဧည့်သည် ၃ယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားခဲ့ပါတယ်...
သူမ မင်္ဂလာဆောင်မှာ သူမရဲ့အဖေကို သူမနဲ့တူတူ လမ်းတွဲလျှောက်စေချင်ခဲ့လို့ပါ.. ဒါပေမဲ့ သူမ အမေက အဖေဘယ်သူလဲမပြောပြတဲ့အတွက် သူမ အမေ ဒိုင်ယာရီထဲက ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ ယောင်္ကျားသုံးယောက်ကို ဖိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. ဤသို့ဖြင့် ထိုကျွန်းငယ်လေးပေါ်တွင် အချစ်ဟောင်းများပြန်လည်ဖူးပွင့်ပြီး.. အချစ်သစ်များလည်းမွေးဖွားခဲ့ကြပါတယ်.. အဖေအရင်း ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ကြည့်ရှူဖော်ထုတ်ကြပါလို့....
ဒီကားလေးဟာ အမေနဲ့သမီးချစ်.. သူငယ်ချင်းတွေရဲ့နွေးထွေးမှု.. မိသာစုရဲ့ပြည့်စုံမှုကို သီချင်းလေးတွေနဲ့ ကောင်းကောင်းဖော်ပြသွာနိုင်ပါတယ်..
အစက အသက် ၅၉နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Meryl Streep ကို ဒီလောက်သွက်သွက်လက်လက် ကခုံပြီး ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သရုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တောင် မထင်မိပါဘူး..
သူမရဲ့ အချစ်ဟောင်းကို တွေ့တဲ့အချိန်မှာ သူမကိုပြစ်သွားပြီး တစ်ခြားမိန်းမတစ်ယောက်ကိုလက်ထက်သွားတဲ့အတွက် စိတ်လဲနာတယ်.. ငယ်ကချစ် နှစ်၁၀၀ မမေ့သာဆိုသလို ရင်တွေလဲခုန်တယ်.. တွေ့လဲတွေ့ချင်တယ်.. မတွေ့လဲမတွေ့ရဲတဲ့ အချိန်မှာ Mamma Mia သီချင်းကို ဆိုပြီး သွက်သွက်လက်လက်လေး သရုပ်ဆောင်သွားတာဖြင့် သူမအသက် ၅၉ နှစ်ဆိုတာကိုမေ့ပြီး .. ကောင်မလေးတစ်ယောက်သရုပ်ဆောင်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲ.. အချစ်က သူမကိုနုပျိုစေခဲ့တာပါ.. သီချင်းလဲဆိုရင်း မျက်နှာအမူအယာကလဲ emotion အပြည့်နဲ့သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် ကျမတကယ်ကို လေးစားအားကျခဲ့ရပါတယ်... ရုပ်ရှင်ထဲ စီးမျောသွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူမနဲ့အတူလိုက်ဆိုလိုက်က ချင်စိတ်တောင်ပေါက်ပါတယ်.. ကျမအနေနဲ့ သူဟာသရုပ်ဆောင်နေတာပါလားလို့ တွေးမိတိုင်း အရမ်းကို ချီးကျူးမိပါတယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူသရုပ်ဆောင်နေတာကို ကျမသိနေရက်နဲ့ သူမကို အသက်ကြီးကြီးအဖွားကြီးတစ်ယောက်လို့ပြောင်းမြင်ပေးလို့မရဘူး... ဇာတ်လမ်းအရ အချစ်ကြောင့်နုပျိုသွားပင်မဲ့.. သူမဟာ သူမအနုပညာကြောင့် ပရိတ်သတ်မျက်လုံးထဲမှာ နုပျိုခဲ့ပါတယ်... စုစုပေါင်း သီချင်း ၂၄ ပုဒ်ပါတဲ့ အထဲမှာ အဲဒိသီချင်းလေးဟာ ကျမအကြိုက်ဆုံးထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်..
နောက်တစ်ခုက ဂျိမ်းစဘွန်း မင်းသားအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Pierce Brosnan ကို အရင်က ကျွန်မဒီလိုပဲ ကြည့်ခဲ့ပါတယ်. ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူး မရှိခဲ့ပါဘူး.. ဒီကားမှာ ကျမသူ့ကို ကြိုက်သွားအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာကတော့.. သူ့ငယ်ချစ်ကို လိုက်ရှင်းပြရင်း ဆိုတဲ့ SOS ဆိုတဲ့ သီချင်းမှာပါ.. သူ့ကို action မင်းသားကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ ကြည့်ဖူးခဲ့ပြီး.. မျက်လုံးထဲမှာ အဖိုးကြီးလို့ပဲ သတ်မှတ်ခဲ့မိပင်မဲ့ ခုတော့ မဗေဒါ ရူးသွပ်ရတဲ့ မင်းသားစာရင်းထဲ မင်းသားငယ်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြီးနေရာယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်..
အသက် ၅၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Pierce Brosnan ဟာ action တင်မက romance ရော Musical ရောကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပုံကလဲ လူငယ်လေး လူပျိုလှည့်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲ.. ဟော.. သူ့ရဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အရည်အချင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်လဲ.. သူ့ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားက မြန်မာပြည်က ပရိတ်သတ်ထမင်းစားပြီး ကြီးကျယ်ပြနေတဲ့ ဗိုက်တရွှဲရွှဲမင်းသားငယ်တွေထက် အများကြီးသာပါတယ်.. ပရိတ်သတ်ကျွေးတဲ့ ထမင်းစားပြီး show bussiness အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူတစ်ယောက် ဟာ သူ့ရဲ့ figure ကိုထိမ်းခြင်းသည်လဲ ပရိတ်သတ်ကို လေးစားခြင်းတစ်ခုပဲလို့ ကျမမြင်ပါတယ်... ဒါတွေထားပါတော့.. အဲဒိကိစ္စ နောက်မှပဲ ပိုစ့်သက်သက်တင်တော့မယ်.. ခုတော့ အောက်က SOS သီချင်းလေးကို ခံစားသွားကြပါအုံး...
သီချင်းအားလုံကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ ကျမအကြိုက်ဆုံးတွေထဲမှာပါတာကတော့... Donna (Meryl Streep) ဟာ.. သူ့ကို ပြစ်သွားတဲ့ သူ့ချစ်သူကို ရုတ်တရက်ပြန်တွေ့လိုက်ရတော့.. စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငိုတဲ့အခန်းမှာ သူ့သူငယ်ချင်း ၂ယောက်က သူ့ကို စိတ်ပျော်အောင်လုပ်ပြီးချော့တဲ့အခန်းပါ.. အဲဒိမှာ ၂ပုဒ်ပါပါတယ်.. ၁ပုဒ်က
"Chiquitita" လို့ခေါ်ပြီး နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ "Dancing Queen" ပါ.. ၂ပုဒ်လုံးဖော်ပြချင်ပေမဲ့ ပိုစ့်အရမ်းရှည်သွားမှာစိုးလို့ Dancing Queen ကိုပဲ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်.. အဲဒိ ကားမှာ Donna ရဲ့ သူငယ်ချင်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ အဖွားကြီး ၂ယောက်က အရမ်းရီရပါတယ်.. လူဆိုတာ ဘယ်လောက် အသက်ကြီးကြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်တွေ့ရင် အားလုံးနုပျို ပျော်ရွှင်သွားကြတာပါပဲ...
မဗေဒါကို မျက်ရည်တရွှဲရွှဲ ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိပါသေးတယ်.. ကျမအကြိုက်ဆုံးသီချင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်... သီချင်းနားထောင်ရင် စာသားရော တီးလုံးပါ သေချာခံစားပြီးနားထောင်တတ်တဲ့ ကျမရဲ့ အကျင့်ကို သရုပ်ဆောင်နဲ့ ကောင်းကောင်းဖမ်းစားသွားတော့ မျက်ရည်လည်ရွဲခဲ့ရပါတယ်.. အဲဒါကတော့ သူမသမီးမင်္ဂလာဆောင်နေ့မှာ သူမချစ်သူက သတို့သမီးအဖေ အဖြစ်တွဲလျှောက်ပေးခွင့်ကိုလာပြောတဲ့အခါမှာ.. သူမ တစ်သက်လုံး နာကျည်းခဲ့ရတာတွေ.. သူမချစ်သူကို ပြောချင်ခဲ့တာတွေ.. သူမရဲ့မာန်.. သူမရဲ့အချစ်နဲ့အမုန်းကို သီချင်းစာသားထိထိမိမိနဲ့သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်..
The winner Takes It All လို့ အမည်ရပါတယ်... ခံစားသွားကြပါအုံး...
ကျမကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေအများကြီးပါပဲ.. စိတ်ဝင်စားရင်သွားကြည့်ကြပါ.. အားလုံးဖော်ပြဖို့အဆင်မပြေလို့ သိသလောက် လင်ခ့်လေးတွေ အောက်မှာပေးလိုက်ပါတယ်...
Honey Honey (Reading Her mom diary)
Super Truper (Before the wedding Night)
Does Your Mother Know (Very Funny)
Money Money Money (Nice Acting and Amusing)
Chiquitita (When Her friends comfort her, Heartwarming)
Take A Chance On Me (Funny, old and fat but sexy, Sing when nearly Movie ending)
Lay All Your Love For Me (Young and Energetic)
Our Last Summer (Three Dads and their Daughter)
Slipping Through My Fingers ( Mother's love for her daughter [Sop.. Sop.. i cried] )
When All is Said And Done (Oldies love but sweet )
I Do I Do I Do I Do I Do ( Charming [my heart pound and i would say I DO too] )
Gimme! Gimme! Gimme! (Music Video)
Posted by mabaydar at 7:30 PM5comments :
Labels: song , Video , ရုပ်ရှင် , ဝေဖန်ရေး
ကျနော့် စက်ကထရီမလေးကို အလုပ်ဖြုတ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပို့လိုက်တဲ့ အီးမေးလ်ထဲကရတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဟာသလေးပါ.. ဖတ်ပြီးရီရလွန်းလို့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်..
အစကတော့ မြန်မာဘာသာပြန်ပေးမလို့ပါပဲ.. ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရတာ ပိုအဆင်ပြေပြီး ပိုရီရတယ်ထင်လို့ ဒီအတိုင်းပဲမျှဝေလိုက်ပါတယ်...
တစ်ချက်ပြုံးရင် တစ်ရက်အသက်ရှည်ပါတယ်တဲ့ ဂျောက်ဂျက်ကာတွန်းမှာကြားဖူးတာပါ..
ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ .. ကျနော့် စက်ကထရီမလေးကို အလုပ်ဖြုတ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း တဲ့....
I went downstairs for breakfast hoping my wife would be pleasant and say…
As it turned out, she barely even said good morning,
Let alone, 'Happy Birthday'
Well, that's marriage, but the kids… they will remember.
My kids came bouncing downstairs for breakfast and didn't sayaword.
So when I left for the office, I felt pretty low.
by the way “Happy Birthday!'
I worked until one o'clock, when Jane knocked on my door and said, 'You
know, it’s suchabeautiful day outside, and it is your Birthday…
I said, 'Thanks, Jane, that's the greatest thing I've heard all day. Let's
We went to lunch but we didn't go where we normally would go.
She chose ataquiet bistro withaprivate table.
Jane said, 'You know, it’s suchabeautiful day. We don't need to go
straight back to the office, Do we?'
'Let's drop by my apartment; it's just around the corner.'
'Boss, if you don't mind, I'm going to step into the bedroom for just a
moment, I'll be right back.'
'Ok.' I nervously replied her.
Followed by my wife, my kids, and dozens of my friends and co-workers…all
singingabirthday song.
Posted by mabaydar at 11:38 AM2comments :
Posted by mabaydar at 7:26 PM 10 comments :
ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သော ဒုလ္လဘတရားငါးပါးတွင် မနုဿတဘာဝဒုလ္လဘဟုဆိုသော ရခဲကြီးငါးခုထဲမှ မနုဿလူသားအဖြစ်ကိုတော့ ရရှိခဲ့ကြပါပြီ..ထိုရခဲလှသော လူ့ဘဝကို လူရယ်လို့ထိုက်တန်အောင် နေထိုင်ပြုမူဖို့ရန်မှာ သမ္မာဒိဋ္ဌိ(အမြင်မှန်အသိမှန်) ဖြစ်ဖို့ရာ အလွန်အရေးကြီးလှပါ၏.. မေ့မေ့လျော့လျော့ ပေါ့ပေါ့ဆဆဖြင့် နေထိုင်မည်ဆိုပါက လူ့ဘဝဆိုသည်မှာ မပြည့်စုံခြင်းများ မကျေနပ်ခြင်းများ မျှော်လင့်နေရခြင်းများ စသည်ဖြင့် ပျော်ရွှင်တခဏ သောကအပြဲ နေထိုင်ဆဲဟုပင်ဆိုရပါလိမ့်မည်...
ခြေထောက်နှစ်ချောင်းပေါ်တွင် ရပ်၍ပခုံးနှစ်ဖက်ကြား ခေါင်းပေါက်ရုံဖြင့် လူဟူ၍ပီပီသသမဆိုထိုက်ပါ..လူဟူ၍ခေါ်ဆိုထိုက်ရန်မှာ လူသည်လူသားဆန်မှုရှိရပါမည်.. အဘယ့်ကြောင့်ဟူမူ သတ္တဝါထဲတွင် လူသားသည် အသိဥာဏ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်တည်း..ထိုအသိဥာဏ်အမြင့်ဆုံးပါဆိုသော လူသားသည် တိရိစ္ဆာန်တို့ကဲ့သို့ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းခွန်အားကြီးသူက နိုင်စတန်းဆိုသော တောတွင်းအလေ့အထများအတိုင်း ပြုမူလုပ်ကိုင်ပါက လူသားဆန်မှုမှ လျော့ကျပြီး အသွင်သဏ္ဍန်အားဖြင့်သာ ကျန်ရှိ၍လူပီသမှု မရှိတော့ပါ...
သတ္တဝါတိုင်းတွင် အတ္တဆိုသည်ရှိ၏ ထို့ကြောင့် လူသားတွင်လည်း အတ္တရှိသည်.. ထိုအတ္တသည် မိမိ၏အကျိုစီးပွားကို ရှေ့တန်းတင်သည်.. အပြစ်မဆိုလိုပါ.. နိယာမတရားတစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်.. သို့ရာတွင် မိမိ၏အတ္တကို သတိတရားဖြင့် ဆင်ခြင်ပြုလုပ်သင့်ပါသည်.. တပါးသူများအား မထိခိုက်သင့်ပါ. ပုထုဇဉ် ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ မကင်းကြပါ ဘာသာရေး အဆုံးအမနှင့် ယဉ်ကျေးမှုရှိသော သူတို့တွင်လည်း မကင်းကြပါ.. သို့ပါသော်လည်း ထိုသူများသည် လောဘဖြစ်လျှင်လည်း အတောမသတ်မဖြစ်ပါ။ သင့်တင့်လျှောက်ပတ်မှုရလျှင် ကျေနပ်သွားကြသည်။ ဒေါသဖြစ်လျှင်လည်း အသိနှင့် သတိတရားဝင်လာလျှင် ထိုဒေါသကိုလျော့ချပြစ်ကြသည်..ပြုလုပ်ဖွယ်ကိစ္စများတွင်လည်း တွေဝေမှုမရှိဘဲ အကြောင်းနှင့် အကျိုးတရားကို ဆင်ခြင်၍ပြုလုပ်တတ်ကြသည်.. ထိုသို့သော စိတ်နေစိတ်ထားရှိသူတွေများလာပါက လောကကြီး ဒိထက်ပို၍သာယာလာလိမ့်မည်ဟု ယူဆမိပါသည်..
သို့ပါသော်လည်း သေမြေကြီး အပြီးဘဲဆိုသူများနှင့် နောင်ဘဝ နောက်ကိုယ်နဲ့ ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုသူများလည်းရှိကြပါသေးသည်.. ထိုသူတို့၏ ယုံကြည်မှုကို မည်သို့မျှဝေဖန်ရေးသားခြင်းမပြုလိုသော်လည်း လူနှင့်လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သင့်တင့်မျှတစွာနေထိုင်မှု ပြုရန်လိုအပ်ပါသည်.. ကိုယ့်ကြောင့် သူတပါး၏ ရှင်သန်ခြင်းကိစ္စ၌ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လျှင်သော်လည်းကောင်း ရှင်သန်ခြင်းကိုရပ်တန့်သွားစေလျှင်သော် လည်းကောင်းဖြစ်ခဲ့လျှင် နှစ်ဦးစလုံးမကောင်းပါ.. အဘယ်နည်းဟူမူ တဘက်သူများသည်လည်း တုံ့ပြန်တတ်သော၊ တုံ့ပြန်နိုင်သော ပုထုဇဉ်များဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်... ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့လျှင် ငြိမ်းအေးစွာအတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေးမှု ပျက်သုန်းသွားပြီး ဘဝတလျှောက် ပူလောင်မှု စိတ်သောကဖိစီးမှုများဖြင့် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိဖြစ်စေ သေဆုံးသည့်အချိန်ထိဖြစ်စေ ခံစားသွားရနိုင်ပါသည်..မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ သဘောထားလိုက်ပါ၊ မပြောဆိုခဲ့ဘူးလို့ သဘောထားလိုက်ပါဟုဆို၍မရတော့ပါ..
အချို့သူများလည်းရှိပါသေးသည်.. မိမိနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အလုပ်ဋ္ဌာန စသည်တို့တွင် မလိုမုန်းထား၍ ချေထိုးခြင်း၊ ဂုံးချောခြင်း၊ တိုက်တွန်းခြင်းတို့ကို ပြုမူတတ်ကြပါသည်.. ထိုသူများကို အဘယ့်ကြောင့် ဤသို့ဖြစ်ရသည်ကိုမေးကြည့်ပါက များသောအားဖြင့် ကြည့်မရ၍ဟုဖြေဆိုတတ်ကြပါသည်.. ကြည့်မရတိုင်း ဤသို့ပြုမူနေပါက မိမိ၌လူမုန်းများလာခြင်းသာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်...
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် လူရယ်လို့ဖြစ်တည်ခိုက်မှာ လူပီသရန်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော လူသားဘဝကိုရယူရန်ဖြစ်ပါသည်.. လူ့ဘဝတွင် ငွေရှာရန်တစ်ခုထဲအတွက် မဟုတ်ပါ.. စီးစိမ်းခံစားရန်တစ်ခုထဲအတွက်လည်း မဟုတ်ပါ.. သို့ဆိုလျှင် ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓသည် လူ့ဘဝကို ဒုလ္လဘတရားတစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်းဟောကြားခဲ့မည် မဟုတ်ပါ.. လူတိုင်းလူတိုင်းသည် ဘယ်အရာသည်ကောင်းမှု ဘယ်အရာသည် မကောင်းမှုဟု သိကြသည်သာဖြစ်၏.. မကောင်းမှုကို ရှောင်၍ ကောင်းမှုကို ဆောင်ကာ ဤသတ္တလောကကြီးတွင် ငြိမ်းအေးချမ်းသာစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိ၍ လူပီသသောသူများဖြစ်နိုင်ကြစေရန် စေတနာရှေ့ထားရေးသားပေးလိုက်ရပေသည်..
Posted by အတုလ at 10:43 AM 1 comment :
Posted by mabaydar at 3:51 PM6comments :
နောက်ကျနေပေမဲ့ ဗွီဒီယိုပြီးမှ အဲဒိနေ့အကြောင်းကိုရေးမယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချုပ်တီးပြီး ဖိစီးထားလိုက်တာ.. ဒီနေ့တော့ အားလုံးစောင့်စားနေတဲ့ မဗေဒါရဲ့ စကာင်္ပူမှမြန်မာဘလော့ဂါများ စုံဆည်းပွဲမှတ်တမ်းတင် ဗွီဒီယိုလေးကို အဖျက်အစီး အခက်အခဲပေါင်းများစွာထဲက အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားလို့ ဒီနေ့မှ gatheringနေ့(06/09/08) လေးက မဗေဒါတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရအကြောင်းလေးတွေကို စားမြုပ်ပြန် (အဲလေ...) အရသာခံပြန်ပြောင်းအောင့်မေ့ပြီးပြောပြခွင့်ရပါပြီ...
အဲဒိနေ့မတိုင်ခင်အထိ မဗေဒါကိုယ်တိုင်လဲ BBQ pit ကို အွန်လိုင်းကနေ book လိုက်တာဆိုတော့ လိပ်စာကိုသာသိပြီး ဘယ်လိုသွားရမယ်.. ဘာကားစီးရမယ်သေချာမသိခဲ့ပါဘူး.. ခါတိုင်း သွားနေကျ fisherman village နားထင်လို့ ဘတ်စ်ကားနံပါတ် ၄၀၃စီးလို့အားလုံးကိုပြောထားမိပါတယ်.. တကယ့်နေ့ကျတော့ မဗေဒါလဲအရင်သွားပြီးနေရာရှာမယ်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ထားပေမဲ့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် နောက်ကျပြီးနောက်ဆုံးတော့ တိုက်စီနဲ့ပဲဒိုးခဲ့ရပါတော့တယ်.. တိုက်စီသမားကို area A လို့ပြောတာ မသိလို့.. ဟိုမောင်းဒီမောင်းနဲ့တောင် နဲနဲကြာသွားပါသေးတယ်.. နောက်ဆုံးရှာတွေ့တော့ အဲဒိနေရာက ဘတ်စ်ကားဂိတ်နဲ့လဲ နဲနဲလှမ်းပါတယ်.. မဗေဒါပြောတဲ့ ၄၀၃ ကတော့ ရောက်ကိုမရောက်တာပါ.. ၄၀၃က beach ရဲ့ fisherman village ဘက်ကိုပဲရောက်တာပါ.. ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် လျှောက်လာလို့တော့ရပါတယ်.. နဲနဲတော့ဝေးတာပေါ့နော်..
ဒါနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်သိတဲ့ မမယ်လိုဒီမောင်ရော.. ဘိုဘိုရော.. TommyGirlရောကို.. msg လှမ်းပို့လိုက်ပါတယ်.. ၄၀၃မရောက်ကြောင်း.. ဖြစ်နိုင်ရင် တိုက်စီကိုစုပြီးငှားလာပါက တစ်ယောက်ကို ၁ကျပ်နှုန်းလောက်သာကျနိုင်ကြောင်း ပြောပြလိုက်ပါတယ်..
နာရီဝက်လောက်စောင့်ပြီးတော့ အရင်ဆုံးရောက်လာတာ ဘိုဘိုနဲ့တော်မီ.. နောက်တော့ မ(စ်)သွန်းသွန်း.. စက်တင်ဘာဒရင်းမ်.. StevenWang.. မမယ်လိုဒီမောင်.. ဖြိုးမင်းထွန်းတို့နဲ့အတူ Catering service ကပစ္စည်းတွေပါရောက်လာကြတယ်.. ခဏနေတော့ Mr.DBAတို့ ကိုဂျွန်မိုးတို့မိသားစုတို့နဲ့ ပုလုကွေး တောင်ပေါ်သား ကိုနေ နဲ့ကိုမိုးကြယ် တော်တော်များများရောက်လာကြတယ်.. သူတို့က မဗေဒါပြောထားတဲ့ ၄၀၃ ကိုစီးသွားလို့ လမ်းလျှောက်လိုက်ရတယ်ဆိုတာသိတော့.. မဗေဒါကျိတ်ပြီး အားနာခဲ့မိတယ်.. ခုထိလဲအားနာမိပါတယ်..
နောက် မြတ်မင်းဟန်တို့.. ဝေယံလင်းတို့.. မောင်သန့်ဇင်တို့ အားလုံးပါပဲ..ရောက်လာကြတယ်.
နောက်ကျတဲ့သူတွေကတော့ ကိုကျော်ဇေယျာတို့ ကိုဇင်ကိုလတ်တို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်..ဟဲဟဲ..
အားလုံးနီးပါးစုံတော့ အကင်ဆရာက ကိုဇေယျာနဲ့ ကိုစိုးမင်းထိုက်(တောင်ပေါ်သား)... ဘလော့ကိုတစ်ထိုင်တည်း update လုပ်နေတာက မောင်သန့်ဇင်... မဗေဒါကတော့ တစ်ခါတစ်လေ ကင်မရာရိုက်လိုက်..တစ်ခါတစ်လေတော့ ဖေဖေကရိုက်ပေးလိုက်နဲ့ ဗျာများနေတာပေါ့..
ကိုနေနဲ့ကိုမိုးကြယ်က bookmarkလေးတွေလိုက်ဝေတယ်.. မမယ်လိုဒီမောင်က စပွန်စာ ၇၅% ပြီးကျန်ရှိတဲ့ ၂၅%ကို စက္ကူအိတ်လေးနဲ့ လိုက်ကောက်တော့ မဗေဒါက BBQ Pit ဖိုးကို Sponsor ပေးခဲ့တယ်... အလှူငွေတွေကများနေပြီး စပွန်ဆာတွေကလဲပြန်မယူတော့ မမယ်လိုဒီမောင်က အလှူလုပ်ပေးမယ်တဲ့.. ဖြစ်နိုင်ရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ် စတုဒီသာကျွေးရင်း ဘလော့ဂါတွေထပ်ဆုံချင်သေးတယ်.. လိုအပ်ရင် အလှူငွေထပ်ထည့်ပေးအုံးမယ်.. လုပ်ဖြစ်မယ့်နေ့လေးကို စောင့်မျှော်နေတယ်နော်..
လူစုံတော့ တစ်ယောက်ချင်းစီမိတ်ဆက်ကြတယ်... ပြီးတော့ ကိုနေဖုန်းလတ်အတွက် ၃၀စက္ကန့်ညိမ်ပြီးစုတောင်းပေးကြတယ်.. နောက်ပြီး ပါလာတဲ့လက်ဆောင်လေးတွေကို နာမည်စာရင်း ထိပ်နဲ့ဘိတ်နဲ့ စပြီး အစဉ်တိုင်းလဲကြတယ်.. အလယ်မှာကိုနေနဲ့မိုးကြယ်နဲ့အတူတူပြန်ကျနေပြီး လဲမဲ့သူမရှိတော့လို့ ကိုဂျွန်မိုးကိုပဲလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်.. ဘာကြီးလဲတော့မသိဘူး.. ရှည်ရှည်ကြီး.. ကျန်ကျောင်းဓားကြီးထင်တယ်.. ကလေးတွေကစားလို့ရတာပေါ့.. ဟီး..ဟီး...(စတာ)ခဏနေတော့ ကျက်နေတာလေးတွေနဲနဲပါးစားကြရင်း မမယ်လိုဒီမောင်ဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့ Socialization on Net ဆိုတာကိုနားထောင်ကြတယ်.. ကိုဂျွန်မိုးက ထပ်စောင်းဆွေးနွေးတယ်.. ပြီးတော့ ဗိုက်လဲစာစာနဲ့စားကြတယ်.. အားလုံးကအပျော်လွန်နေတော့ စကားတွေပြောပြီး ဘယ်သူမှလဲ မယ်မယ်ရရစားလိုက်ရမယ်မထင်ဘူး.. (နောက်ဆုံး မိုးက အများဆုံးစားသွားတယ်ထင်တယ်)..
ပြီးတော့ အချိန်ရှိခိုက်လုံ့လစိုက်ပြီး အားရပါးရ မျောက်ရှုံးအောင်ဆော့ကြတာပေါ့.. ကိုဇင်ကိုလတ်က ကလေးဗိုလ်ပေါ့နော်.. ဆော့နေတဲ့အချိန်မှာ အသက်အရွယ် အဆင့်အတန်း အပိုင်းအခြားလုံးဝမရှိပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆော့ခဲ့ကြတာ မမေ့နိုင်စရာပါပဲ.. ဆော့တဲ့ကစားနည်လေးကတော့ Pit pat bone တဲ့ ၃ယောက်တစ်ဖွဲ့.. အရင်ဆုံးဈေးဦးပေါက်ပြီး "ခါးလေးလှုပ်ကာ"သီချင်းနဲ့ လမ်းလျှောက်လိုက်ရတာက bone 1 ကိုဂျွန်မိုး.. ကိုငယ်(မန္တလေး)နဲ့ အိဝေဖြိုးတို့အဖွဲ့ပေါ့..
နောက်အပြိုင်အဆိုင် အုပ်စုတိုင်းက ဒူးတွေထောက်ကြ.. လက်တွေမြှောက်ကြပေါ့.. ခေတ်မီသွားအောင် နောက်ထပ် ဒုတိယလိုက်ပြီးထွက်သွားရတဲ့အဖွဲ့က ဘိုဘို.. မ(စ်)သွန်းသွန်းနဲ့ စက်တင်ဘာဒရင်းမ်တို့အဖွဲ့.. ပထမတော့ "အိုးလေးလှုပ်ပါအုံး"နဲ့ပေါ့.. စက်တင်ဘာဒရင်းမ်ကတော့ အပီလှုပ်လိုက်ပေမဲ့ ကျန်၂ယောက်မလှုပ်တလှုပ်ဖြစ်နေလို့.. ထပ်ခိုင်းခံလိုက်ရတယ်.. ကိုဘိုဘိုကြီးကို ကောင်မလေး၂ယောက်ချစ်ရေးဆိုပြီး ဘယ်တစ်ယောက်ကိုဘာကြောင့်ရွေးတယ်ဆိုတာပြောခိုင်းခဲ့တယ်.. သူ့အချစ်က ပန်းသီးဖြစ်ရင် ခွဲခြမ်းပြီးပေးလိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ အချစ်မျိုးကို.. ၂ယောက်လုံးပဲတဲ့.. (ကြောက်စရာ).. :P
ပြီးလဲပြီးရော.. ပွဲဖျက်တဲ့ မိုးကရွာပါလေရော... မြန်မာဘလော့ဂါတွေကို ဒီလိုလာစမ်းလို့ဘယ်ရမလဲနော်.. အမိုးအောက်သွားပြီး ရွံ့ထဲလေထဲမှာ ဆက်ဆော့ကြတာပေါ့..စုံလို့ပဲ.. ပုံပြောတမ်း.. တီတီတူတူ.. နာမည်ခေါ်တဲ့ကစားနည်း.. ကိုပွတ်မှားသွားလို့ "ပဲပြုတ်သည် မထား" သီချင်းနဲ့ ကိုငယ်ကကူညီပြီး ကပြရတယ်.. ကျန်တဲ့သူတွေလဲမှားသေးတယ်.. မဗေဒါမှားတော့ "ငယ်ကျွမ်းဆွေ"သီချင်းနဲ့ ကိုဇင်ကိုလတ်နဲ့တွဲကရသေးတယ်.. လတ်စသတ်တော့ ကိုဇင်ကိုလတ်..ကိုငယ်တို့က မဗေဒါ..တော်မီတို့ရဲ့ကျောင်းက senior ကြီးတွေကိုး..ီဘလော့ရေးမှန်းမသိတာပဲရှိတယ်.. အရင်ထဲက အပြင်မှာမျက်မှန်းတန်းသိပြီးသားတွေ..
မိုးလဲစဲ.. ည ၁၀နာရီခွဲတော့ အားလုံးအိမ်ပြန်သင့်ပြီပေါ့.. နောက်နေ့တွေမှာ လည်ပတ်နေကျ ဘ၀စက်ဝန်းကြီးထဲမှာ.. လုပ်နေကျ.. လုပ်ချင်တာထက် လုပ်သင့်တာတွေကိုဦးစားပေးရတဲ့ ဘ၀ကိုပြန်ရောက်ရတော့မယ်လေ.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်.. အဲဒိနေ့..အဲဒိလူ..အဲဒိအဖြစ်အပျက်လေးကတော့ ကျွန်မတို့အားလုံးရဲ့ ဘ၀နဂ္ဂတစ်တွေထဲမှာ ပျော်စရာ memory လေးအနေနဲ့ တည်ရှိသွားမှာပါလေ....
စားကြွင်း။ ။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဗွီဒီယိုထွက်ရှိရေး နှောင့်နှေးခဲ့ရတဲ့အတွက် အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်..
အောက်ကဗွီဒီယိုရဲ့ high quality file နဲ့ ပထမပိုင်းရော ဒုတိယပိုင်းရော ၂ခုပေါင်းကို file hosting တစ်ခုခုမှာတင်ပြီး ပါဝင်သူများကို လင်ခ့်ပို့ပေးပါမယ်..
Youtube ရဲ့ ကန့်သတ်ချက်ကြောင့် ဗွီဒီယိုကို နောက်ဆုံးအချိန်မှ ၂ခြမ်းထပ်ခွဲနေရလို့ ၂ရက်ပိုနောက်ကျသွားတာပါ..
Myanmar Blogger Gathering in SG EP 1
Myanmar Blogger Gathering in SG EP 2
Posted by mabaydar at 8:36 PM 15 comments :
Posted by အတုလ at 12:22 PM3comments :